Hormuudka Kulliyadda Beeraha Jaamacadda Benadir oo Ka Hadlay Adeegsiga Sumaha Beeraha - Latest News Updates
Hormuudka Kulliyadda Beeraha Jaamacadda Benadir oo Ka Hadlay Adeegsiga Sumaha Beeraha
Hormuudka Kulliyadda Beeraha Jaamacadda Benadir Prof. Maxamed Cali Sh.Cabdi ayaa dhawaan ka hadlay dhibaatooyinka ka jira adeegsiga sumaha beeraha.
Wuxuu hadalkiisa ku billaabay ‘’si looga badbaadiyo beeraha cudurrada iyo dulinnada kala duwan waxaa la adeegsadaa habab kala duwan waxaana ka mid ah adeegsiga sumaha oo ah walxo kiimika ah.
Si loo adeegsato sunta ugu habboon waa in marka hore aad taqaanaa dhibaatada ku haysa haddaadan aqoon u lahayn waxaad la tashan kartaa dadka aqoonta u leh arrintaas.
Qofka ku shaqeynaya sumaha waa in uu yahay qof aqoon u leh oo tababaran maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin badan oo degaanka iyo nolosha aadanaha ku yimaada haddii si qalad ah loo adeegsado.
Sumaha waa in laga soo iibsadaa meelaha ay joogaan dadka aqoonta u leh si ay macluumaad badan kuu siiyaan.
Si looga badbaado Qataraha sumaha waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah: In sumaha meel gooni ah lagu keydiyo,in la isticmaalo qiyaasta sunta ee saxda ah,in la hawl geliyo qalabka ku habboon ee loo adeegsado sumaha kala duwan iyo in lagu dhaqmo habraaca adeegsiga ee u qoran sumaha kala duwan.
Labada dhibaato oo aadka u daran mar kastana lala kulmo waxaa ka mid ah marka la adeegsado ka dib sumaha oo aan la sugin waqtigii ay ku baabi’i lahaayeen sumaha maxaa yeelay sun waliba waxay leedahay waqti la sugo oo aan waxii lagu buufiyay la cuni Karin.
Dhibaatada labaad waa weelasha sumaha ka dhammaato oo dib loo isticmaalo iyadoo lagu shubanayo biyo,saliid ama wax yaabo kale oo la cuno taasna waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo sababi kara dhimasho waa in weelasha sumaha lagu keenay dib dambe loo isticmaalin waa in isla marka ay suntu ka dhammaato la burburiyaa.